Andian-teny 5 tokony holazainao amin'ny zanakao | Bezzia
Raha ny fitaizan-janaka dia zava-dehibe toy ny fahatsapanao ny teny. Betsaka ny ray aman-dreny maneho fitiavana na fitiavam-po amin'ny zanany, saingy tsy afaka maneho izany amin'ny fehezanteny na teny.
Raha ray na reny ianao dia zava-dehibe ny hahafantaranao fa ny andian-teny dia manan-danja rehefa manabe ny zanakao Izany no mahatsara ny fahaizanao mamoaka amin'ny teny ny zavatra tena tsapanao ho an'ilay kely.
1 Ny maha-zava-dehibe ny andianteny amin'ny fanabeazana ny ankizy
2 Ny fifandraisan'ny andianteny sy ny fiheveran-tena ho an'ny ankizy
3 Andian-teny tokony holazainao amin'ny zanakao
Ny maha-zava-dehibe ny andianteny amin'ny fanabeazana ny ankizy
Fantaro amin'ny fotoana rehetra izay lazainao amin'ny zanakao. Ny andian-teny dia manan-danja kokoa noho izay mety ho eritreretinao tamin'ny voalohany. Na izany aza, ny tsy fahampian'ny fotoana sy ny haavo haingam-pandeha izay entin'ny ray aman-dreny, dia midika fa ireo andianteny na teny ireo dia zara raha manana fiampangana ara-pihetseham-po na karazana hafatra manentana ho an'ilay kely.
Ny fanabeazana tsara dia manomboka amin'ny fotoana rehetra, avy amin'ny teny izay ampiasain'ny ray aman-dreny rehefa miresaka amin'ny zanany. Ny andian-teny mety dia ilaina amin'ny fanamafisana ny fahatokisan-tena sy ny antony manosika ny zaza.
Ny fifandraisan'ny andianteny sy ny fiheveran-tena ho an'ny ankizy
Iray amin'ireo olana lehibe mahazo ny ankizy maro ankehitriny, Izy io dia ahitana ny tsy fisian'ny fiheveran-tena ho miharihary sy manan-danja. Izany dia azo vahana amin'ny andianteny na andianteny manampy amin'ny fanentanana ny kely.
Tsy mitovy ny manabe ny ankizy mifototra amin'ny fehezanteny misy heviny, be fitiavana na misy fiatraikany noho ny fanaovana azy amin'ny alàlan'ny fanevatevana sy ny kiakiaka. Amin'ny tranga voalohany dia mihamafy ny fahatokisan-tena ary amin'ny tranga faharoa dia hijaly ny tsy fahatokisan-tena miharihary sy mazava ny zaza.
Andian-teny tokony holazainao amin'ny zanakao
Ny tanjon'ireto karazana andianteny ireto dia tsy iza fa ny mandrisika sy manome fiarovana ny ankizy ny tenany. Aza adino ny antsipirian'ny andian-teny dimy izay tokony holazainao matetika amin'ny zanakao:
Matoky Anao aho. Ilaina io fehezan-teny io raha ny amin'ny fananana fatokisana tena ny kely. Ny fiarovana azon'ilay kely atao dia mety hahatonga azy hahatratra ny tanjona maro napetraka.
Mahatakatra anao aho ary mahatakatra anao. Ny fametrahana ny tenanao amin'ny kiraron'ilay zaza dia zava-dehibe raha ny amin'ny fahazoana azy sy hahafahan'ny kely mamaha ireo olana samihafa mety hananany.
Reharehako ianao. Raha mahatsapa ilay zaza fa eo anilany ny ray aman-dreniny ary faly amin'ny zavatra ataony, hatanjaka ny fahatokisan-tena sy ny fahatokisan-tena amin'ny lafiny rehetra. Tsy misy fahasambarana lehibe kokoa ho an'ny zaza noho ny mahita ny avonavon'ny ray aman-dreniny aminy.
Tsy misy zavatra mitranga ary manandrama indray. Noho io fehezan-teny io dia lasa mazoto kokoa ny zaza ary miatrika tsy misy olana amin'ny karazana fahoriana mety hitranga.
Afaka manao izay tianao ianao. Tsy tsara ny mametraka sakana amin'ny ankizy. Zava-dehibe ny manentana azy ireo araka izay tratra mba hahatratrarany tanjona isan-karazany amin'ny fiainana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ampianaro ny ankizy » Andian-teny 5 tokony holazainao amin'ny zanakao
Facades amin'ny trano: fomba 4 sy ny mampiavaka azy